I-FAQ - I-SHENZHEN TEYELEEC TECHNOLOGY CO., LTD
Ithini imikhiqizo yakho eyinhloko?
Imikhiqizo yethu eyinhloko izibani zevidiyo ezihlukahlukene ezifana ne-Aluminium Alloy LED Light, i-Aluminium Alloy RGB / Ukukhanya Okumibalabala, Ukukhanya Kwendandatho Yokugcwalisa, Ukukhanya Okujwayelekile Kwe-LED nezinye izinto ezihlobene.
Ithini isikhathi sakho sokukhokha?
Samukela kakhulu ukudluliselwa kwebhange kwe-T/T, i-Western Union kanye ne-PayPal.
Ithini i-INCOTERMS yakho yokuthumela?
EXW noma FOB.
Ingabe uyazivivinya zonke izimpahla zakho ngaphambi kokuthunyelwa?
Yebo, sizozihlola. Sinenqubo yokuhlola eqinile kusukela ezintweni ezingavuthiwe kuya ekugcinweni kwempahla endaweni yokugcina impahla.
Uma unomthumeli wakho siqu e-China, sizokuthumela izimpahla ekhelini elimisiwe lomdluliseli wakho. Uma ungenaye owakho umdluliseli, sizobe sesicaphuna inani lokuthumela futhi sikuhlelele ukuthunyelwa. Sizolandela imiyalelo yakho yokuthumela ngokuqinile.
Ungakwazi ukunikeza isevisi ye-OEM ne-ODM?
Yebo, sinikeza isevisi kusuka ku-ID design, i-R&D, ezokukhiqiza nezokuthutha. Sithatha nama-oda we-OEM ne-ODM futhi.
Ithini i-MOQ yakho?
Kuya ngokuthi, kumamodeli amaningi, i-MOQ ingu-500-1000pcs.
Ibukeka kanjani ukupakisha kwakho?
Sizopakisha kahle into ukuze siqiniseke ukuthi ngeke yonakale ngesikhathi sokuthunyelwa okude. Futhi sizolandela imiyalelo yakho yokupakisha ngokuqinile.
Sithini isikhathi sokuhola?
Kuya ngenani le-oda lakho, ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-3-5 nge-oda elincane. Kuma-oda we-OEM, kuthatha cishe izinsuku ezingama-20-30.
Ngingalithola i-oda lesampula?
Yebo, sizokuthumela isampula ukuze uhlolwe futhi uhlolwe ikhwalithi. Akuwona wonke amasampula amahhala, kuyaxoxiswana.
Ukuze sibambisane okokuqala, sizizwa singavikelekile ukukhokha ngokuqondile, yini okufanele siyenze?
Ungafaka i-oda ngesitolo sethu sewebhu esisemthethweni.
Ithini isevisi yakho yewaranti?
Sinikeza iwaranti yonyaka owodwa, sizoshintsha entsha yonke ngemva kokuthola izinto zakho ezinokukhubazeka noma ungakwazi ukuvele wenze ividiyo emfushane ukuze ufakazele ukuthi inephutha bese sizokuthumela entsha nge-oda lakho elilandelayo.
Abahlinzeki beLamp Dimmable, Iphaneli Led Rectangular, Gcwalisa Ukukhanya, I-Led Light Yendandatho Yezithombe, Light Panel Suppliers, Iphaneli ye-Rgb Led,